Ụbọchị: 7 August 2019
Ọdụ ụgbọ mmiri nke Golden Horn na ụgbọ mmiri Nostalgic na ụgbọ oloko na Eid al-Adha
Rahmi M. Koç Museum ga-akpọrọ ndị ọbịa gaa Golden Horn Tour site n'ụgbọ mmiri na-enweghị atụ na ụgbọ oloko na Eid al-Adha. Rahmi M. Koç Museum na-agwa ndị ọbịa ya ọtụtụ ihe nchịkọta site na mkpọkọ ụgbọ ala gaa n'ụgbọ ụmụaka, 'Submarine Cruise', 'Train Nostalgic' na 'Boat' [More ...]
Ationgbọ njem ọha na Kocaeli bụ n'efu N'oge Bayram. Obodo Kocaeli n’obodo ukwu, n’oge emume Eid al-Adha ga-enwe ike iso ndị enyi na ndị ikwu nwee ike inye ọrụ ụgbọ njem ana-akwụghị ụgwọ. N'ime onodu a, ụmụ amaala 11 August Sachin na-achụ àjà site n'ụbọchị mbụ nke oriri [More ...]
Onye isi ala IMM Ekrem Imamoglu, Zeytinburnu "Buyukyali" na "Seagull" na Kabatas mgbe Galataport'da mere nyocha. Emamoğlu kwusiri ike na ọ ga-eleta ọrụ niile ga-emetụta obodo ahụ wee sị, tanesi Nke a bụ otu n'ime ọrụ 20 anyị chọtara. Anyị ga na-eleta ha. Ma mgbe ahụ [More ...]
NUMBİKE, nke İBB nyere ndị bi na offeredBB nyere ndị bi na 481 afọ gara aga. Ebumnuche a, nke ezubere imepụta ụzọ njem, nke bara uru maka gburugburu ebe obibi na ahụike mmadụ, ezubere ịgbasa na Istanbul. İSPARK, onye enyemaka nke Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), [More ...]
Emebere Murat Çakır na İSPARK General Directorate
Maazị Ekrem İmamoğlu, onye bịara n'ọchịchị mgbe ntuli aka nke obodo Istanbul Metropolitan guzobere ndị isi na-ahụ maka njikwa n'ime ọchịchị. N'ọnọdụ a, a họpụtara Maazi Murat Çakır dị ka onye njikwa nke İSPARK. Ogige Dabere na 2005 Na ebumnuche ihu ọchị ọchị [More ...]
Audits Pre-Bayram mụbara na AŞTİ
Otu egwuregwu bọọlụ Ankara, Eid al-Adha'na nke isi obodo n'akụkụ anọ nke isi obodo ahụ na-arụ nnukwu ọrụ. Ndi otu ndi uwe ojii nke obodo ukwu na eme njem nlegharị anya oge ha n’obodo niile, ebe oriri nke ụmụ amaala [More ...]
Ọnọdụ Kacha ọhụrụ na Boğazköprü OSB Mgbanwe Roadzọ
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç, OSB Mgbanwe-Boğazköprü n'etiti Okporo Xzọ 6. Ọ gara ebe a na-ewu Direlọ Ọrụ Ngalaba mpaghara. Nzuko na onye isi ọhụụ Director of Highways Ahmet Turan Gülhaş, Mayor Memduh Büyükkılıç kwupụtara mkpa Boğazköprü maka Kayseri. [More ...]
A ga-akpọrọ Irmak - Zonguldak Line Stone Wall na Culvert Car mgbazinye ụgbọ ala Nrụpụta ọrụ ga-eme
Ationgbọ njemPark nke Cleanbọchị Ọsacha na Cleangbọala
Kocaeli Metropolitan Municipality TransportationPark's 336 ụgbọ ala abanye ọcha nhicha tupu ike enwere ike ịme n'oge ememme ahụ. Ime, mputa, windo, ụlọ ịkwọ ụgbọala, aka, oche ndị njem, ala, elu ụlọ, mpụga na ala nkuku nhicha. [More ...]
N’ịkọwa na mkpebi akpachara anya banyere ebe a na-adọba ụgbọala nke Bayrampaşa Bus Station, akagbuola PresidentBB Onye isi ala Ekrem İmamoğlu kwuru: Imamoglu, akwụghị ụgwọ site na ndị na-adọba ụgbọala nke ndị bi na Istanbul na-ezukọ ma ọ bụ gafere ndị ikwu ha n'oge oriri ahụ [More ...]
Taa 7 August 1903 Thessaloniki-Monastery Railway 169,5 kilomita ndị Bekee na-agba Baraka ọkụ ma na-ebipụ ndị na-emepụta telifon.
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (251) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (619) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (518) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (665) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (827) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (734) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)